Maitiro ekuisa theme nyowani muLXDE | Linux Vakapindwa muropa
Nezuro takaona maitiro ekuisa nyowani desktop theme yeGnome. Maitiro akareruka kunyangwe zvisiri nyore kuwana kumushandisi wekutanga. Kune mamwe madhesiki ane dambudziko rakafanana uye anoshandiswa zvakanyanya.
Iyi ndiyo kesi yeLXDE, desktop isina huremu iyo inoshandiswa zvakanyanya asi hazvisi nyore kushandura mifananidzo, zvirinani kune vashandisi veavice. Asi kana tangoziva kushanda kwekuisa dingindira nyowani, LXDE kugadzirisa kuri nyore uye nyore.
Kuisa dingindira idzva tinofanirwa ramba uchifunga kuti tinofanirwa kuisa theme, iyo GTK faira uye ma icon. Dingindira rinoshandura zvinhu zvakaita sechikamu chepamusoro chemahwindo, iwo mapaneru, nezvimwe ... Iyo gtk faira ichachinja matabo uye zvemukati zvemahwindo kusara kwemafonti nemifananidzo, zvinhu zvinoenda mune mamwe mafaera.
Dingindira nyowani muLXDE inoda iyo theme theme, iyo gtk faira uye ma icon.
Dzese dziri mukati iyo yakavanzika folda .themes, dhairekitori ine maforodha maduku ane zvinhu zvinodiwa kugadzirisa maikoni, zvinyorwa zvemavara kana mafaera egtk.
Saka kuti tiise nyowani yedesktop theme, isu tinofanirwa kutanga tema yacho. Vhura iyo Gnome-Tarisa webhusaiti isu tichawana akawanda madingindira uye zvimwe zvinhu izvo zvichatibatsira isu kugadzirisa yedu LXDE.
Kana tangozviwana, tinosunungura izvo zvinhu mumafaira akasiyana akavanzika. Zvese zviri mukati meiyo .themes folda. Kana tangoita izvi, ikozvino tinoda kutaurira LXDE kushandisa mafaera matsva seprimary.
Kuti tiite izvi tinoenda kuLXAppearance, chirongwa chinogonesa ichi chinhu chechinhu. Isu tinowanzo zviwana mu Zvirongwa zveSystem, asi iko kugoverwa kungave kwakazvishandura, mune iyi nyaya isu tinongofanirwa kuenda kuKutsvaga uye nekuisa izwi rekuti "LXAppearance". Kana tangomaka shanduko dzatinoda kuisa, isu tinongofanirwa kuvhara iko kunyorera uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Maitiro ekuisa theme nyowani muLXDE
Iwe unofanirwa kuisa madimiki asipo eakavhurika mukoma
Uye iro rakavanzika .themes dhairekitori?
kana dhairekitori riine. Mberi sgnfc inova faira yakavanzika uye kazhinji .theme iri mune yako folda yekumba
Zvinoita sekunge kwandiri zvishoma kujekesa kutaura uye izvo hazvibatsire avo vasingazive Linux.
ZVINOGADZIRA CHETE KWANGU.
YeMotokari Giredhi Linux: iyo yakavhurika-sosi chirongwa chemotokari